Ciidanka Dowladda oo weerar ku dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa ay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab waxaa ay ka bilaabeen tuulooyin hoostaga Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, iyda oo intii ay howlgalka ku jireen ay dagaal la galeen Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidanka xoogga Dalka ee Baardheere Maxamed Cali Maxamed ayaa saxaafadda u sheegay in ay iyagu weerar ku qaadeen halka ay ku sugnaayeen Al-Shabaab markii ay xog ka heleen Dadka degaanka,isla markaan ay ka dileen lix xubnood.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in Ciidanka xoogga ay halkaasi kaga gubeen Kooxda Al-Shabaab Laba Gaari oo nooca dagaalka ah.
Mulki Afrax oo ka mid ah Dadka ku dhaqan degaannada hoos taga Baardheere ayaa Wakaaladda Wararka ee Xinhua u sheegtay in ay u yimaddeen Malleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab, iyagoo amray in ay qasab ku siiyaan Canshuuro , balse ay durbadiiba si deg-deg ah halkaasi ku gaareen Ciidanka Dowladda.